How'd it happen and more reports?: Ryuji finance ကုမ္ပဏီ မှဝယ်ယူသူအသစ်များအတွက် Hire purchase အစီအစဉ်!
Ryuji finance ကုမ္ပဏီ မှဝယ်ယူသူအသစ်များအတွက် Hire purchase အစီအစဉ်!
အဲဒါပါဘဲ..... ငွေကြေးဈေးကွက်ကို ပြည်တွင်းဘဏ်တောင် မရဲသရဲ စမ်းသပ်နေကျတာကြာတယ်….
ဒီမှာ နိုင်ငံတကာက ငွေကြေးကုမ္မဏီတွေ လုပ်သွားတာကြည့်ပြီးအတုယူစမ်းပါဗျ.....
အမိမြေမှာ ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း ၃၂၀၀လောက်ကို ၃၀ %ပေးပြီး လစဉ်အရစ်ကပေး installment အကြွေးစနစ်နှင့်ေ ရာင်းပေးနေတဲ့ Ryuji finance အုပ်စုပါ....
ငွေကြေး မပြည်စုံလို့ စိတ်ညှစ်နေသူတွေ အတွက်....
ခင်မင်ရသောမိတ်ဆွေများနှင့် တန်ဖိုးထားရသောဝယ်ယူသူများ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကုန်ပစ္စည်း အမျိုးအစားပေါင်း ၃၂၀၀ ကျော်ကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်ရန် ယခုလို ကြော်ငြာခွင့်ရတဲ့အတွက် အလွန်ပင်ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
စိတ်လှုပ်ရှားကောင်းတဲ့ နာမည်ကြီး အမှတ်တံဆိပ်များဖြစ်ကြသည့် Meizu ၊ Hisense ၊ Xiaomi ၊ LG ၊ Samsung ၊ Motorcycle စသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် တခြား ကုန်ပစ္စည်းများကိုလည်း အမျိုးအစားအလိုက် ရွေးချယ်နိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ သတင်းများတွင်ပါဝင်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ တန်ဖိုးထားရသောမိတ်ဆွေများနှင့် ဝယ်ယူသူများအတွက် အကောင်းဆုံးကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ယူနိုင်စေရန် အမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်သွားပါမည်။
Ryuji finance ကုမ္ပဏီ မှဝယ်ယူသူအသစ်များအတွက် Hire purchase အစီအစဉ်မှ customer များ ကုန်ပစ္စည်းဝယ်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီပေးပါသည်။
customer မှ လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို ပထမဆုံးအနေဖြင့် ၃၀ % အရင်ပေးချေလိုက်ယုံဖြင့် အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်ပြီး လူကြီးမင်းတို့အိမ်မက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဝယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Ryuji Finance ရဲ့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်လာရန် စိတ်ဝင်စားပါက ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Hire purchase အစီအစဉ်ဖြင့် ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်များ ရရှိနိုင်မလဲဆိုတာ လေ့လာကြည့်လိုက်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ရုံးသို့လာရောက်ပြီး လေ့လာ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ website နှင့် Facebook စာမျက်နှာများတွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ တင်ပြထားသော အထူးအရောင်းမြှင့်တင်ရေး အစီအစဉ်များနှင့် နောက်ဆုံးရသတင်းများကို သိရှိနိုင်ရန် စောင့်ကြည့်ပေးစေလိုပါသည်။
သင်ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်များထဲမှ ကုန်ပစ္စည်း ၃၀၀၀ ကျော်ကို ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သင့်လျော်သော ငွေပေးချေမှုအစီအစဉ်ဖြင့် ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
Headquarters: 250 Anawrahta Road, Lanmadaw Township, Yangon, Myanmar
Phone: + 95(1) 210620, 210459, 212051, 227073
Fax: +951 211274
05/01/2017 /in Press release English pll_586dfe7e688d5 /